एउटा पेटभित्रकी बच्चीको मार्मिक आत्मकथा-NepalKanoon.com
एउटा पेटभित्रकी बच्चीको मार्मिक आत्मकथा
आमा, म आज सात इन्च लामो भएं । तर मेरो सरिरमा सबै अंगहरु छन् । मलाइ तपाइको आवाज एकदमै मनपर्छ, सुनिरहूु झैं लाग्ने । तपाइको आवाज सुन्दा प्रत्येक चोटि म मेरा सा साना हात खुट्टाहरु हल्लाउने प्रयास गर्छु । तपाइको मुटुको धड्कन मेरो एकान्तको साथि हो ।
दोस्रो महिना : आमा, आज मैले मुस्कुराउन सिकें । तर अझै पनि म सानै छु, बाहिरको संसारमा म आफ़ुलाइइ समर्पण गर्न सक्दिन, मलाइ यही न्यानो र सुरक्षित छ, तर पनि बाहिरको संसार कस्तो छ र कहिले हेर्ने भनेर म दिन गन्दै बसेको छु ।
तेस्रो महिना: तपाइलार्इ थाहाछ आमा म छोरीहु, सायद यो कुरा सुनेर तपाइ खुसी हुनु भयो होला म सदा तपाइलार्इ खुसी देख्न चाहन्छु आमा, तपार्इ रुदा मलार्इ साह्रै दुख लाग्छ । म नि तपार्इ संगै रुन्छु तर तपार्इले मेरो आँसु देख्नुहुन्न ।
चौथो महिना :आमा मेरो कपालहरु पलाउन थाले, एकदम नरम र छोटो छ मेरो कपाल् । म प्राय समय कसरत गरेर बिताउछु, अहिले त म हात खुट्टाको औलाहरु नि चलाउन सक्छु अनि टाउको पनि यता उता हल्लाउन सक्छु ।
पाचौं महिना : आज तपार्इ बाबासंग डाक्टरकोमा जानुभयो, उस्ले तपार्इसंग झुट बोल्यो कि म बच्चा हैन भनेर, म कुनै रोग हो रे । यो सुनेर म कत्ति रोए, तर मेरो चिच्याहट कसैले सुनेनन्, आमा म कुनै रोग हैन तपार्इकै आफ़्नै छोरी हो । तर एउटा कुरा मैले बुझिन आमा यो गर्भपतन भनेको के हो ।
छैठौ महिना : आमा आज फ़ेरि तपार्इ त्यो डाक्टरको मा जानुभो । मलार्इ त्यो डाक्टर मनै पर्दैन, ऊ एक्दम क्रुर र निर्दयी छ । उस्ले मेरो न्यानो बासस्थानमा चोट पुर्याउदै छ, सियो जस्तै चुच्चो र धारिलो चिजले मलार्इ धेरै पिडा भैरहेको छ, आमा बिन्ति छ उस्लार्इ रोक्न भन्नुस न, म यहाँ अुैय दुखाइले छट्पटिरहेको छु, बिन्ति छ मलार्इ नमार्नुस, मलार्इ नि सुन्दर संसार हेर्न दिनुस् । मेरो के गल्ति छ र आमा कि मलाइ येस्तो दर्दनाक मृत्यु दिदै हुनुहुन्छ तपार्इलार्इ मेरो माया लाग्दैन आमा, मेरो अन्तिम सास मात्रै बाकी छ अब, आमा बिन्ति छ मलाइ बचाउनुस, म मर्न चाहन्न ‘आमा‘ आमा …. (बच्चीको करुणा सुनिदिने कोहि भएन, उस्को चिच्याहट र प्राण नेपथ्यमै बिलिन भयो)
सातौं महिना : आमा अहिले म सुरक्षित छु । म अहिले भगवानको काखमा छु, वहाँले मलार्इ बोकी रहनु भएको छ अनि मलार्इ गर्भपतनको बारेमा पनि भन्नु भयो, ऐले मैले सबै कुरा बुझें, किन तपार्इले पनि मलार्इ नअपनाउनु भएको मलार्इ माफ़ गरिदिनुस आमा म छोरा भएर जन्मिन सकिन, तर मलार्इ तपार्इसंग केहि गुनासो छैन सिर्फ़ भगवानलार्इ यहि प्रारर्थना छ कि अर्को जुनिमा पनि म तपार्इकै कोखमा छोरा भएर हुर्किन पाऊं, तपार्इ मलार्इ सम्झेर कहिल्यै नरुनु ल किनकि तपार्इको आखामा आसु देख्दा मेरो भक्कानो फ़ुटेर आउछ आमा मेरी प्यारी आमा‘आमा‘….
सन्देशस् गर्भपातले एउटा हुर्किदै गरेको आत्मालार्इ सदाको लागि मारिदिन्छ । ती दुइ निर्दोष आखाहरुले सुन्दर संसार कहिल्यै देख्न पाउनेछैनन् । अनि त्यो कोमल ओठले कहिल्यै पनि आमा भनेर सम्बोधन गर्न पाउनेछैन ।
गर्भपात (बिशेषगरि कन्या भ्रुणहत्या) एउटा जघन्य अपराध हो । छोरा होस या छोरी, दुवै आफ़्नै सन्तान हुन र दुवैलाइ यो धर्तिमा आउने अधिकार छ । कुरिती र कुसंस्कृतिको नाममा गर्भमै छोरिको हत्या नगरौं, आखिर ती निर्दोष सन्तानको के नै दोष छ र फ़ुल्नै नपाइ निर्दैयीपुर्वक कोपिलामै फ़ुललाइ नमारौं । तितो सत्य फेसबुक पेजबाट